Vaovao - Ny fametrahana sy fikojakojana ny valve globe
Ny fametrahana sy ny fikojakojana ny valve globe
Valveloba globe am-perinasa, ny karazan-tsolika rehetra dia tokony ho feno sy tsy mandeha tsara. Ny bolt amin'ny flange sy ny bracket dia tena ilaina. Tokony ho simba ny kofehy ary tsy avela hilamina. Ny voanjo mafy amin'ny handwheel, raha hita madiodio dia tokony hohamafisina ara-potoana, mba tsy hitafy ny fifandraisana na ho very ny handwheel sy ny nameplate. Raha very ny handwheel an'ny valvelobe eran-tany dia tsy avela hampiasaina ny fatra azo ovaina ary tokony ho fitaovana ara-potoana. Tsy avela hidongy na tsy hanana fahazoan-dàlana mialoha ny fihary fonosana. Ny fonosana fiarovana dia tokony hapetraka eo amin'ny vatan'ny valizy eran-tany amin'ny tontolo iainana izay maloto mora foana amin'ny orana, lanezy, vovoka, fasika ary loto hafa. Ny refy eo amin'ny valizy manerantany dia tokony ho feno, marina ary mazava. Ny tombo-kase, ny satrony ary ny kojakoja pneumatika an'ny valvelobe eran-tany dia tokony ho feno sy tsy mandeha tsara. Aza mandondona, mijoro na manohana zavatra mavesatra eo amin'ny valizy eran-tany miasa; Valve tsy metaly sy valve vy, indrindra ny fijanonana amin'ny valiny amin'ny asa fikojakojana amin'ny famokarana lasitra famokarana alohan'ny sy aorian'ny fikolokoloana ny valizy, satria ny valizy eo am-panaovana ny asa famokarana dia mitana andraikitra lehibe, fikolokoloana milamina sy mandaitra hiaro ny valizy havanana, ny valizy mba hiasa tsara ary hanalava ny androm-piainan'ny valizy. Ny fikolokoloana valve dia mety ho toa tsotra, saingy tsia. Matetika misy endrika tsy miraharaha ny asa.
Voalohany, rehefa mihosotra ny valvelobe eran-tany, dia matetika no odian-tsy hita ny olan'ny tsindrona diloilo. Aorian'ny famenoana menaka dia misafidy ny valizy sy ny fomba fampidirana menaka ny mpandraharaha ary manao ny asa famenoana menaka. Misy toe-javatra roa: amin'ny lafiny iray, ny habetsahan'ny tsindrona tavy dia kely kokoa, ary ny tampon'ny famehezana dia mitafy haingana kokoa noho ny tsy fisian'ny lubricant. Etsy ankilany, fanindronan'ny tavy be loatra, ka miteraka fako. Tsy misy ny kajy marina ny tombo-kase famehezana valva amin'ny bolongola samihafa arakaraka ny karazany sy ny sokajy valves. Ny fahaizan'ny famehezana dia azo isaina amin'ny habe sy ny sokajy amin'ny valizy tapaka, ary avy eo atsindrona ny menaka manara-penitra.
Faharoa, ny olana amin'ny tsindry matetika dia tsy raharahina rehefa manosotra menaka manerantany. Mandritra ny fiasan'ny tsindrona diloilo, ny tsindry fanindronan'ny diloilo dia miova tsy tapaka miaraka amin'ny tampon sy lohasaha. Ambany loatra ny tsindry, mivoaka na tsy mahomby ny tombo-kase, avo loatra ny tsindry, voasakana ny vavan'ny menaka, mihamafy ny menaka ao amin'ny tombo-kase na mihidy amin'ny vaton-tsofina sy ny vilia valizy ny peratra famehezana. Matetika, rehefa ambany loatra ny tsindry fanosotra, ny menaka voatsindrona dia mikoriana mankany amin'ny farany ambany amin'ny valizy misy valizy, izay mazàna amin'ny valves kely maimbo. Ary avo loatra ny tsindry fanosotra, amin'ny lafiny iray, zahao ny tsindry menaka, ary soloina raha voasakana ny lavaka matavy; Etsy ankilany dia ny fanamafisana lipida, hampiasana ny tsiranoka fanadiovana, fanalefahana hatrany ny tsy fahombiazan'ny menaka famehezana, ary fampidirana solon-menaka vaovao. Ho fanampin'izany, ny karazana famehezana sy ny famehezana dia misy fiatraikany amin'ny tsindry fanosotra. Ny endrika famehezana samihafa dia samy manana ny tsindry fanosotra. Amin'ny ankapobeny, ny tsindry fanosotra amin'ny tombo-kase henjana dia avo kokoa noho ny tombo-kase malefaka. Ny fikojakojana ny famakiana baolina dia amin'ny fanjakana misokatra, ny toe-javatra manokana dia misafidy ny hikarakara akaiky. Valve hafa tsy afaka ny hisokatra toerana rehetra. Ny vavahady vavahady dia tsy maintsy nakatona mandritra ny fikojakojana mba hahazoana antoka fa ny diloilo dia feno alika famehezana eo amin'ny mason'ny famehezana. Raha misokatra izy io, ny diloilo fanisiana tombo-kase dia hianjera mivantana ao amin'ny fantsona mikoriana na efi-trano valizy, miteraka fako.
Aorian'ny fametrahana azy dia tokony hozahana tsy tapaka ny valizy manerantany. Ireto ny zavatra tena manara-maso:
(1) ny fitomboka amin'ny tombo-kase an'ny valizy eran-tany.
(2) Ny kofehy trapezoid dia mitafy ny voanjo sy ny voanjo.
(3) Na efa lany daty sy tsy mety ity famonosana ity. Raha simba dia tokony hosoloina ara-potoana.
(4) aorian'ny fanitsiana sy ny fivorian'ny valva manerantany, dia tokony hatao ny fanandramana fanamafisana.